Wasiirka Difaaca Mareykanka oo booqasho ku yimid Muqdisho – SDNTV
Ku-simaha Xoghayaha Gaashaandhigga Mareykanka Christopher Miller ayaa shalay booqasho aan horay loo sii shaacin ku tagay Soomaaliya, tani oo ah booqashadii ugu horeysay ee xoghaye gaashaandhig Mareykanka ah uu ku tago Soomaaliya.
Waa Safarkii ugu dambeysay ee booqasho uu Miller ku tagayo afar waddan ee safarkiisan oo ah kii u horreeyey ee dibadda ah tan iyo markii uu Madaxweyne Trump xilkan u magacaabay toddobaadyo ka hor.
Miller ayaa ku sugnaa saacado kooban oo kali ah magaalada caasimada ah ee Muqdisho, isagoo la kulmay qaar ka mid ah ciidamadii Mareykanka ee halkaas ku sugan, ka dib markii uu ka kicitimay xerada militariga Mareykanka ee Camp Lemonnier ee dalka deriska ah ee Jabuuti.
In kastoo saraakiisha Pentagon-ku ay sheegeen in ujeedada safarku ay tahay in ay la kulmaan ciidamada inta lagu guda jiro munaasabadda Thanksgiving-ka ama mahadnaqqa, waxa ay booqashadani ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in maamulka Trump uu qorsheynayo in uu Soomaaliya ka soo saaro ku dhowaad dhammaan 700 ee askari ee Mareykanka ah ee hadda ku sugan Soomaaliya kuwaasi oo caawimaad siiya ololaha ka hortagga argagixisada ee Soomaaliya.
Milatariga Mareykanka ayaa sidoo kale fuliya duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab iyo kooxda Daacish ee Soomaaliya, iyagoo bishii hore duqeyn ku dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan Al Shabaab.
Pentagon-ka ayaan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin dhimista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, laakiin saraakiisha difaaca ayaa u sheegay warbaahinta CNN in dhimis ballaaran la filayo maalmaha soo socda.
Previous Qarax lala beegsaday Maareeyaha Dekadda Muqdisho
Next Maxkamadda Ciidanka oo dil ku fulisay Rag oo ku jiro Macalin Ilkacase